Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, June 11, 2011 Saturday, June 11, 2011 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီတစ်ပတ်တော့ မက်မွန်ငါးပေါင်းနဲ့ အာလူးထမင်းကို ချက်ကျွေးပါမယ်နော်။ ဒီနှစ်မျိုးကို တစ်ရက်တည်း ချက်စားဖြစ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သီးသန့်စီ ချက်တာပါ။ ကျွန်မနေတဲ့မြို့ကလေးမှာ ဒီရာသီဆို မက်မွန်သီး( peach) တွေ လှိုင်လှိုင်ပေါနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ရာသီပေါ် အသီးအနှံများနဲ့ ဟင်းတွေချက်ဖို့ ဝါသနာထုံတဲ့ ကျွန်မက ငါးကို မက်မွန်သီးနဲ့ ပေါင်းဖို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။
ငါးကို မက်မွန်သီးနဲ့ပေါင်းဖို့အတွက် ပထမဦးစွာ ငါးတစ်ကောင်ကို ကြေးထိုး၊ ဗိုက်ခွဲ၊ ရေစင်အောင်ဆေး သင့်တော်တဲ့ အတုံးလေးတွေ တုံးပြီး ဆား၊ အရသာမှုန့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ခပ်များများ၊ နံနံ၊ ပဲငံပြာရည်တို့ဖြင့်ရောနယ်ပြီး နှပ်ထားပါတယ်။
လတ်ဆတ်သော မက်မွန်သီး ၃လုံးခန့်ကို ရွေးပါတယ်။ ပျော့အိနေတဲ့ အသီးများ မဖြစ်ဖို့ ဂရုစိုက် ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ရေစင်အောင် ဆေးပြီး ပါးပါးလှီးပါတယ်။
ပါးပါးလှီးထားတဲ့ မက်မွန်သီးများကို ငါးရဲ့ အပေါ်ကနေ ဖုံးအုပ်ပါတယ်။ ပြီးနောက် ငရုပ်သီးပါးပါးလှီးထည့်၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့်ဖြူးပါတယ်။ ပေါင်းလိုက်ချိန်မှ ငါးထဲမှရေများ အလိုလိုထွက်လာတဲ့အတွက် ရေသီးသန့်ထည့်စရာ မလိုတော့ပါ။
ထို့နောက် ငါးပန်းကန်ကို ရေနွေးငွေနဲ့ ပုံပါအတိုင်းပေါင်းလိုက်ပါတယ်။ အဖုံးအုပ်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ၁၅မိနစ်ခန့် ပေါင်းပြီးရင် အိုးပေါ်ကချကာ အပေါ်ကနေ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ နံနံပင် ပြန်အုပ်ပါတယ်။
အရသာရှိပြီး မက်မွန်သီးနံ့လေး သင်းသင်းမွှေးနေတဲ့ ငါးမက်မွန်ပေါင်းကို ရပါပြီ။
အာလူးထမင်းပြုလုပ်ဖို့အတွက်တော့ ထမင်းကို ခပ်ပျော့ပျော့ချက်ဖို့ လိုပါတယ်။ လုပ်နည်းမှာ ငါးထမင်း ချက်နည်းအတိုင်းသာ ဖြစ်သော်လည်း ငါးပြုတ်မပါတာတစ်ခုသာ ကွဲပြားပါတယ်။
အာလူးပြုတ်၊ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်၊ ဆီချက်အနီ၊ ပဲပုတ်ကြော်အမှုန့်၊ ခရမ်းချဉ်သီး ဆီသတ်ချက်၊ ကြက်ဥပြုတ်
အာလူးထမင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ အဆာပလာများကို အထက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။.
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, June 09, 2011 Thursday, June 09, 2011 Labels: သုတအဖြာဖြာ
အလွန်သေးငယ်လှတဲ့ ချစ်စဖွယ် စာအုပ်သေးသေးလေးတွေကို မြင်ဖူးကြပါရဲ့လားရှင်… အချို့သော သူတွေကတော့ အပျော်အဖြစ် ပြုလုပ်ထားတဲ့ စာအုပ်ငယ်လေးတွေကို မြင်ဖူးကောင်း မြင်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ စာကြည့်တိုက် ခပ်သေးသေးတစ်ခုစာလုံး အလွန်သေးငယ်လှတဲ့ စာအုပ်တွေချည်း ပြည့်နေတာမျိုးတော့ မြင်တွေ့ဖူးသူ နည်းမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ တကယ်ရှိပါတယ်။ စာကြည့်တိုက် ခပ်သေးသေးလေး တစ်ခုရယ်ပေါ့။ အဲဒီ စာကြည့်တိုက်ငယ်လေးထဲမှာ စာအုပ်သေးသေးတွေ ပြည့်နေအောင် ရှိနေတာပါ။ ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး စာအုပ်တွေစုနေတဲ့ ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး စာကြည့်တိုက်လေးပါ။
စိတ်ဝင်စားစရာ စာကြည့်တိုက်လေးထဲမှာ စာအုပ်အသေးလေးတွေကို စုဆောင်းထားသူက Jozsef Tari ဖြစ်ပါတယ်.. သူဟာ ၁၉၆၉ခုနှစ်ကတည်းက စာအုပ်အသေးလေးတွေကို စုဆောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး စာအုပ်ငယ်ပေါင်း ၄၅၀၀ခန့်စုဆောင်းမိခဲ့ပါတယ်. အဲဒီစာအုပ်တွေထဲမှာ သေးပေ့ဆိုတဲ့ အရွယ် အလျား ၀.၁၂ အနံ ၀.၁၁ သာရှိသော ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး စာအုပ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေဟာ အားကစား၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး ၊ ဂီတ စသဖြင့် အမျိုးအစား စုံလင်လှပါတယ်။ Jozsef Tari ဟာ သူစုဆောင်းထားတဲ့ စာအုပ်ငယ်လေးတွေကို စာအုပ်စင် သေးသေးဖြင့် စနစ်တကျ သပ်ရပ်စွာ စီရီထားပြီး စာအုပ်စင်လေးကို စာကြည့်တိုက်အသေးစားလေးလို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ သူဟာ ဒီစာအုပ်ငယ်လေးတွေကို ဖတ်ဖို့ စုဆောင်းထားတာလား ဒါမှမဟုတ် ဂုဏ်ယူစရာအဖြစ် အလှထားဖို့သက်သက် စုဆောင်းထားတာလား ဆိုတာကိုတော့ စာကြည့်တိုက်ပိုင်ရှင် Jozsef Tari ကသာ အသိဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။
နောက်ထပ် ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး စာကြည့်တိုက်လို့ သတ်မှတ်ထားတာကတော့ အနီရောင် တယ်လီဖုန်းရုံ အဟောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတယ်လီဖုန်းရုံအဟောင်းကို ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူက ကျသင့်ငွေ ၁ပေါင်ဖြင့်သာ ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင်ကာ စာကြည့်တိုက်ကလေးအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ အထဲမှာ စာအုပ်အမျိုးအစားပေါင်း ၁၀၀ကျော် ပါရှိပြီး အချက်အပြုတ်စာအုပ်မှစ၍ ဂန္တ၀င်စာပေအထိ ရှိနေပါတယ်။ DVDခွေများလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီစာကြည့်တိုက်လေးဟာ ၂၄နာရီ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး တစ်နှစ်မှာ ၃၆၅ရက် ဖွင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်ကလေးကနေ စာအုပ်ငှားလိုသူများ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
စိတ်ကူးကောင်းသူများကျတော့ တယ်လီဖုန်းရုံအဟောင်းတောင် စာကြည့်တိုက်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့တွေလည်း ရပ်ရွာတွေမှာ စာကြည့်တိုက်အဆောက်အဦး မဆောက်နိုင်လို့ စာကြည့်တိုက် မထားနိုင်သေးဘူးလို့ ဆင်ခြေပေးမဲ့အစား ရှိတဲ့နေရာလေးမှာ ရသလောက်လေးနဲ့ စာကြည့်တိုက်တစ်ခု ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်တယ် မဟုတ်လားနော်။
Source ; planetoddity.com
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, June 05, 2011 Sunday, June 05, 2011 Labels: သုတအဖြာဖြာ
မော်ရိုကိုနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ မြို့ကလေးတစ်မြို့ကတော့ Chefchaouen လို့အမည်ရတဲ့ မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ မော်ရိုကိုမှာ အလှပ၊ အသန့်ရှင်းဆုံး မြို့ကလေးတစ်မြို့ရယ်လို့ အသိအမှတ် ပြုကြရပါတယ်။ စပိန်နိုင်ငံကနေ ထွက်ပြေးလာကြသူများက ၁၄၇၁ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မော်ရိုကိုနိုင်ငံရဲ့ မြောက်ဖက်စွန်းမှာ တည်ရှိပြီး ကျူးကျော်ရန်စလာသူ ပေါ်တူဂီတို့ကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ခုခံ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့ ခံတပ်မြို့တစ်မြို့လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Chefchaouen မြို့ကလေးဟာ Rif တောင်တန်းကြီးရဲ့ တောင်စောင်းမှာ တည်ရှိနေတာမို့ ကောင်းကင်ပေါ်မှာ တည်ရှိနေတဲ့ မြို့ကလေးလို့ထင်ရမတတ် မြို့ကလေးရှိရာ တောင်တန်းပေါ်မှာ တိမ်တွေ ၀ဲဖြာ ယှက်သိုင်းလို့ ညှို့ညှို့ဆိုင်းဆိုင်း ရှိနေတတ်ပုံက လွမ်းတတ်သူတွေအဖို့တော့ မျက်ရည်ဝဲစရာရယ်လို့ ပြောရမတတ်ပါဘဲ။
စစ်ပွဲများ ပြီးဆုံးလို့ တိုင်းပြည်အေးချမ်းချိန်မှာတော့ မြို့ငယ်ကလေးဟာ နိုင်ငံရေးကြောင့် ထွက်ပြေးခိုလှုံလာရသော မွတ်ဆလင်နဲ့ ဂျူးလူမျိုးတို့ အများဆုံးနေထိုင်ရာ ဒေသ ဖြစ်လာပါတယ်။ Chefchaouen ဆိုတဲ့အမည်ဟာ စပိန်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ “Chauen” က ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး ကျွဲချိုလို့ အမည်ရပါတယ်။ ၄င်းအမည်အတိုင်း Chefchaouen မြို့တည်ရှိနေတဲ့ တောင်ကုန်း၂ခုဟာ အပေါ်စီးက ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွဲချိုပုံသဏ္ဍာန် တည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ မြို့ထဲမှာ ရောင်းချသော လှပအနုစိတ်လှတဲ့ အနုပညာ လက်မှုပစ္စည်းများနဲ့ အရောင်အသွေးစုံလင်လှတဲ့ အထည်အလိပ်များကြောင့် နာမည်ကျော်ရခြင်း ဖြစ်သလို ဆိတ်နို့ကနေ ပြုလုပ်ထားသော အလွန် အရည်အသွေးကောင်းပြီး အရသာရှိလှတဲ့ ဒိန်ခဲတို့ကြောင့်လည်း ထင်ရှားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိုရိုကိုနိုင်ငံက ထွက်ရှိတဲ့ တိုင်းရင်း ပရဆေးပင် အတော်များများဟာလည်း ၄င်း မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေ စိုက်ပျိုးထွက်ရှိတာကြောင့် ပရဆေးပင်များကြောင့်လည်း ထင်ရှားကျော်ကြားပါတယ်။ မြို့ကလေးရဲ့အခြားသော ထူးခြားချက်တစ်ခုက အပြာရောင် မြို့တော်လို့ ခေါ်တွင်ရလောက်အောင် တစ်မြို့လုံး အဆောက်အဦးတွေ၊ အိမ်တွေ၊ လမ်းကြားတွေကို ဆေးအပြာရောင် သုတ်ထားပါတယ်။
လက်မှု အနုပညာပစ္စည်းများနဲ့ ချည်ထည်များ ရောင်းချရာဆိုင်
အဆောက်အဦးများကို အပြာရောင်ဆေးခြယ် သုတ်လိမ်းခြင်း အလေ့အထဟာ မြို့ကလေးမှာ စတင်နေထိုင်ကြသူ ဂျူးလူမျိုးများထံမှ အဆင့်ဆင့် လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်လာတဲ့ အလေ့အထ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မြို့နေ လူထုဟာ ရှေး သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်တဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကြောင့် အပြာရောင်ဆေးခြယ်ထားသော ချည်မျှင်ကို အဝတ်အထည် များတွင်ပါ ထည့်သွင်းယက်လုပ်တတ်ကြပါတယ် ။ ရှေးခေတ်ကတော့ ပင်လယ်ကနေ ရရှိတဲ့ ခရုခွံတစ်မျိုးကနေ ဆိုးဆေးအပြာရောင်ကို ထုတ်ယူခဲ့ကြသော်လည်း ယခုခေတ် ၄င်းဒေသမှာ ဆက်လက် နေထိုင်သူတွေမှာတော့ ခရုခွံကနေ ဆိုးဆေးရအောင် ဘယ်လိုထုတ်ယူတယ်ဆိုတာကိုပါ မေ့ကုန်ကြပြီး အလွယ်တကူရတဲ့ ဆိုးဆေးကိုသာ အသုံးပြုကြပြီး အ၀တ်အစားတွေမှာတော့ ယခုချိန်တိုင် အပြာရောင်ချည်စကို ထည့်သွင်းယက်လုပ် နေကြတုန်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်မြို့လုံးက အဆောက်အဦးတွေဟာ ပြာလွင်နေတာကြောင့် ရောက်လာတဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ အင်မတန်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ လမ်းကြားငယ်လေးတွေ၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေကို ပြာလွင်နေတဲ့အရောင်တွေနဲ့ မြင်ရတာကိုက အမြင်တစ်မျိုးဆန်းစေပါတယ်။ မြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ အဆိုအရ သူတို့တွေဟာ အပြာရောင်ကိုမြင်တိုင်း ခေါင်းပေါ်က အပြာရောင် မိုးကောင်ကင်ကြီးကို သတိရမိကြပြီး မိုးကောင်းကင်ဘုံမှာ နေထိုင်တဲ့ ဘုရားသခင်ကို အမြဲသတိရနေမိအောင် အပြာရောင်ကို သုံးစွဲကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ မြို့ကလေးထဲကို လျှောက်သွားချိန်မှာတော့ ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် အပြာရောင်တွေသာ ဖြစ်နေလေတော့ အပြာရောင်ထဲမှာ လမ်းလျှောက်သွားနေရတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကလည်း တစ်မျိုးလေး ထူးဆန်းနေပါတယ်တဲ့.. အောက်မှာတော့ အပြာရောင်မြို့ကလေးရဲ့ ပုံရိပ်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်..
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, June 04, 2011 Saturday, June 04, 2011 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီတစ်ပတ် စားသောက်ဖွယ်ရာ ကဏ္ဍမှာ ကျွန်မ ဗန်းမော်မြို့ကို ရောက်ခဲ့တုန်း စားခဲ့ရတဲ့ ငါးခေါက်ဆွဲခေါ် မျှစ်ချဉ်ခေါက်ဆွဲ စားကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။ ဧရာဝတီမြစ်နဲ့ တာပိန်မြစ်တို့ရဲ့ ကမ်းဘေးမှာ တည်ရှိတဲ့ ဗန်းမော်မြို့ဟာ ငါးပေါလှတဲ့ မြို့ဖြစ်တာကြောင့် ငါးနိုင်းချင်းနဲ့ ချက်ထားတဲ့ ဗန်းမော်ရဲ့ ခေါက်ဆွဲဟာလည်း အလွန် နာမည် ကျော်လှပါတယ်။ ဗန်းမော်မြို့ရဲ့ သမိုင်းဝင် နံမည်ကျော် ရွှေကျေးနား ဘုရားကို သွားဖူးပြီး အပြန်မှာ သူငယ်ချင်းက ကျွေးတဲ့ ငါးခေါက်ဆွဲဟာ မမေ့နိုင်အောင် ကောင်းလှပါတယ်လို့ ပြောရင် လွန်တယ် မထင်ပါနဲ့ရှင်။ ဗန်းမော်မြို့သူ မြို့သားတို့ဟာ ဧည့်သည်လာရင် ငါးခေါက်ဆွဲကို မဖြစ်မနေ လိုက်ကျွေးလေ့ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ဗန်းမော်မြို့ကို နှစ်ကြိမ်တိတိ ရောက်ဖူးခဲ့တဲ့ ကျွန်မဟာ ရောက်တိုင်းလည်း ငါးခေါက်ဆွဲ စားဖြစ်ပါတယ်။ ငါးခေါက်ဆွဲကို မျှစ်ချဉ်ခေါက်ဆွဲလို့လည်း ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ ထိုသို့ ခေါ်ကြခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းက ခေါက်ဆွဲကို မျှစ်ချဉ်နဲ့ အဓိက စားကြတာဖြစ်တာကြောင့် မျှစ်ချဉ်ခေါက်ဆွဲလို့လည်း ခေါ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဗန်းမော်ရောက်တုန်းက ကျွန်မ စားခဲ့ရတဲ့ ငါးခေါက်ဆွဲချက်နည်းလေးကို မမေ့မလျော့ အိမ်မှာပြန်ချက်စားဖြစ်တာလေးကို ဒီနေရာကနေ ပြန်လည် ဝေမျှပါရစေရှင်။ ၀ါသနာပါရင် ချက်စားကြည့်ကြဖို့ပါနော်။
အဆပလာ မများလှတဲ့အပြင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ လွယ်ကူပြီး စားလို့လည်းကောင်းတဲ့ ငါးခေါက်ဆွဲချက်ဖို့ ပထမဦးစွာ ငါးခေါက်ဆွဲချက်ဖို့ ငါးကြင်းကို ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း ဆား အရသာမှုန့်စသည်တို့နဲ့ အရင်ဦးဆုံး ပြုတ်ပါတယ်။ ငါးကြင်းမရှိလဲ မိမိမှာ အဆင်ပြေတဲ့ငါးနဲ့ ချက်လို့ရပါတယ်။
ထို့နောက် ပြုတ်ထားတဲ့ ငါးကို အသားနွင်ပါတယ်။ ငါးပြုတ်ထားတဲ့ အရည်ကို ဟင်းရည်အဖြစ် ပြန်လည်အသုံးပြုပါတယ်။
ပြုတ်ပြီး အသားနွင်ထားတဲ့ ငါးအသားတွေကို ကြက်သွန်ဖြူနီ၊ ဂျင်း ၊ ငရုပ်ပွရေစိမ်ထောင်းပြီး ဆီသတ်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီကို ငါးအလေးချိန်နဲ့ဆတူ ထည့်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထို့နောက် ဟင်းနှစ်ထဲ ဆား၊ ငံပြာရည် အရသာမှုန့် နှစ်သက်သလို ထည့်နိုင်ပါတယ်။
မျှစ်ချဉ်ကို နနွင်းမှုန့်၊ ဆား အရသာမှုန့်ထည့်ပြီး ပြုတ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပြုတ်ပြီး မျှစ်ချဉ်ကို ငရုပ်သီး၊ နံနံတို့နဲ့ မွှေထားပါတယ်။ ခေါက်ဆွဲနဲ့ စားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
ငရုပ်ဆီ၊ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် (ဆီအနီ၊ အ၀ါ) တို့ကို ချက်ပါတယ်။ ကြာညှို့ကြိုက်တတ်ရင် ထည့်နိုင်ပါတယ်။ နံနံပင်များကို ရေဆေးပြီး အသင့်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ငါးဖယ်ထည့်လိုက ငါးဖယ်ကြော်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီ ငါးခေါက်ဆွဲ ချက်နည်းလေးကို ပြောပြတဲ့ ဗန်းမော်သူ သူငယ်ချင်းက ငါးခေါက်ဆွဲမှာ ငရုပ်သီးအစိမ်းနဲ့ဆို မလိုက်ဖက်ဘဲ ငရုပ်သီးအခြောက်မှုန့်ကို မီးတူးအောင်လှော်မှသာ ပိုမိုလိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မမှာ ငရုပ်သီးကို မီးတူးအောင်လှော်ဖို့ရာ ညှော်နံ့ပြင်းလွန်းတာကြောင့် မကြာခင် ဘေးအိမ်တွေ ထွက်ရိုက်မှာ ကြောက်ရတာနဲ့ မီးမတူးခင် ရပ်လိုက်ရပါတယ်။း)
မိမိစားမဲ့ ဆန်ခေါက်ဆွဲဖြစ်စေ၊ ရေစိမ်ခေါက်ဆွဲဖြစ်စေ ပြုတ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မတူညီတဲ့ ဒေသ အခေါ်အဝေါ်တွေကို ပြောပြရရင် ကျွန်မတို့ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာတော့ ဆန်ပြားလို့ ရန်ကုန်မှာခေါ်တဲ့ ခေါက်ဆွဲမျိုးကို ဆန်ခေါက်ဆွဲလို့ ခေါ်ပြီး ရှမ်းခေါက်ဆွဲလို့ ခေါ်တဲ့ ခေါက်ဆွဲ အသေးလေးတွေကို ရေစိမ်ခေါက်ဆွဲလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ပြုတ်ပြီးသားခေါက်ဆွဲဖတ်ကို ပန်းကန်ထဲထည့် ငါးဟင်းအနှစ်၊ ဆီကျက်၊ ဆား၊ အရသာမှုန့်၊ ငရုပ်သီး၊ နံနံ၊ ငါးဖယ်ညှပ်ထည့်လို့ ပြင်ဆင်လိုက်ရင် အဆင်သင့်စားလို့ရတဲ့ ငါးခေါက်ဆွဲ ရပါပြီ။
အရည်နဲ့ကြိုက်သူများအတွက် ရေစိမ်( ရှမ်းခေါက်ဆွဲ) အရည်ဖျော်
ငါးပြုတ်ရည်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဟင်းရည်ပါ။ ငရုပ်ကောင်းနဲ့ နံနံပင် ခတ်ထားတာပါ။
ပါဆယ်ဆွဲလိုသူများအတွက် ချိုင့်နဲ့ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။း)
ကြက်သား၊ ၀က်သား မစားသူများအတွက်လည်း အဆင်ပြေ သင့်လျော်တဲ့ ဗန်းမော် မျှစ်ချဉ်ခေါက်ဆွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မျှစ်ချဉ် မရှိတဲ့ အရပ်ဒေသမှာဖြစ်နေခဲ့လျှင်လည်း အခြားသော အချဉ်များဖြင့် စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ သင်သာမျှစ်ချဉ်ကြိုက်တတ်သူ ဖြစ်ခဲ့ရင် မျှစ်ချဉ်များများနဲ့ ခေါက်ဆွဲပန်းကန်ထဲမှာ တစ်ခါတည်း နယ်ပြီး ငရုပ်သီးစပ်စပ်လေးနဲ့ စားရင် မိုးအေးအေးမှာ သိပ်လိုက်ဖက် စားကောင်းတဲ့ ခေါက်ဆွဲဖြစ်ပါတယ်လို့...
ဒီချက်နည်းကို ပြောပြတဲ့ သူငယ်ချင်းမိသားစုနဲ့ ဗန်းမော်အလည်ခေါ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ကို ကျေးဇူးအထူး တင်ကြောင်း ပြောကြားပါရစေနော်။ အားလုံးအတွက် ပျော်ရွှင်စရာ Weekend ဖြစ်ကြပါစေရှင်.....